Kolombia, Ny Fifandirany Sy Ny Fanantenàny Araka Ny Fijerin’ireo Mpanabe Ao Anatin’ny ‘Quotidiens d’Urabá’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2016 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Ελληνικά, Deutsch, English, русский, Español
Sary: Araben'i Urabá, sary tao amin'ny Wikimedia Commons, ho an'ny sehatry ny daholobe
Hatrany Kolombia ary mandalo amin'ilay sehatra famoahana vaovao Medium, ny Quotidiens d'Urabá no varavarankelin'ny fiainana andavanandron'ny ampahan'ny faritra avaratra fanaovana fambolena sy fiompiana ao amin'ny firenena.Tantara atolotra avy amin'ny fomba fijerin'ny sehatra misahana fanabeazana ao amin'ilay departemanta no mandrafitra ny Quotidiens ary miendrika santionany avy amin'ny andavanandrom-piainana sy ny tolon'ireo mponina ao an-toerana, izay zara raha nisy nahafantatra raha tsy niezaka ny nitady habaka ety anaty tranonkala ry zareo.
Voasoratra amin'ny fomba tsotra, entin'ny Quotidiens d'Urabá [es] isika hitsidika ireo izay miezaka ny hiditra ao anatin'ny rafitry ny fanabeazana ary mikatsaka ny hoaviny amin'ny fitetezana ireo « lalankely izay tomorin'ny zavamaniry maroloko miaro ireo làlana efa tena ratsy tokoa. »
Harena tsy fahita firy ny rano, saingy betsaka ny alaolana ahafahana mahita azy. Izany no mahatonga ny orana ho midika fifaliana ato anatin'ny Urabá cordouanne misy anay. Ato anatin'ity tany feno fifanoheran-javatra sy hadalàna ity, misy olona vonona ny handia làlana mandritry ny ora maro, hisetra izay toetrandro misy, mba hamonjy sekoly.
Urabá dia iray amin'ireo departemanta kolombiana niharan'ilay « fitokonana mitam-piadiana » tamin'ny fiandohan'ny Avrily, nambaran'ilay fikambanana mpanao heloka bevava fantatra amin'ny anarana hoe « Clan Úsuga », vondrona iray afaka mipetraka ho mpisehatra iray manandanja ao anatin'ny vanimpotoana aty aorian'ny fifandonana, raha toa voasonia ny fifanarahana iray eo amin'ny governemanta sy ireo vondrona mpanao ady anaty akata, aty aorian'ny 50 taona mahery nisian'ny fifandonana mitam-piadiana.
Nandalo dingana maro ny fifandirana kolombiana, saingy azo raisina toy ny hoe fitohizan'ny tolona iray ho fizakàna ny tany sy ny ho zotra ara-politikan'ny vahoaka sivily izy io, izay matetika no tratry ny tery vaimanta eo anelanelan'ireo toby mpifanandrina.
Ao anatin'ny vanimpotoana manahirana ho an'ny firenena, ahoana no hiainana ao anaty faritra iray misy fifandonana? Midika inona ny fiainana anatin'ireo faritra aronjon'ny vondrona mitam-piadiana sy ny tolona ho amin'ny zo hanana tany? Efa am-bolana maro izao ny Quotidiens no tsy nivoaka intsony, saingy tsy lany hery na nilazoan'ny toetrandro akory ireo fijoroana vavolombelona. Araka izany dia azo atao foana ny manaraka ao anatin'ireny pejy ireny ny zotran'ireo izay tsy hafa fa mpisava làlana any ambava-ady amin'ny fifandonana politika sy toekarena ao Kolombia.
Tolona manokan'ny tena, ao anaty ady mitam-piadiana
Arahan'ny Quotidiens akaiky ny fiainan'ireo olona manodidina azy, toa ny an'i Ángel, izay tsy hafa fa zatovo iray fanampiny amin'ireo efa ao amin'ilay faritra ihany, izay ny biby fiompy no manome ny harena ho an'ireo vitsivitsy tompon-tany ao aminy. Nipoitra tao amin'io faritany io ny hery ivelan'ny tafika avy amin'ny elatra havanana mba hanohitra ireo mpiady anaty akatan'ny elatra havia. Nitombo tao anatin'ny fahitàna ny rainy niasa ho an'ireo hery ivelan'ny tafika ireo i Ángel, ary nanaraka ny diany rehefa tonga tamin'ny faha-12 taonany. Nisaraka tamin'io fotoana io ny ray sy reniny ary dia safidy manadala no tsy maintsy natrehany: hiditra hanatevina mandritry ny fotoana maharitra ny laharan'ilay fikambanana mpanao heloka bevava na hanohy ny nofinofiny ho lasa mpilalao baolina kitra toa an'i Cristiano Ronaldo. Indray andro, tapaka ny heviny fa ilay faharoa no horaisiny, nahorony ny entany ary lasa nikaroka ny reniny izy :
Rehefa nandeha elaela ny fotoana, sarotra ho azy ny niaina lavitry ny reniny, tsy hoe nalahelo azy fotsiny izy fa koa nanoloana azy ny tsy maintsy idirana amin'ny fomba matotra ho ao anatin'ilay fikambanana izay niasàny tsindraindray, izay nitarika ny fandaozany ny fianakaviana, ny fianarana ary ny nofiny ho lasa toa an'i Cristiano Ronaldo. Tsy karazan'olona mamotsotra ny nofinofiny mora foana i Ángel, Izany no antony nanoronany ny entany sy nandehanany nikaroka ny reniny mba hanomboka fiainana vaovao miaraka aminy.
Rehefa tsy miraharaha vahoaka ny rafi-panabeazana
Tsy miaina anaty tontolo mitovy amin'ny an'i Richar i Ángel, Richar izay ao afovoan'ny iray amin'ireo tantara tantarain'ny Quotidiens ihany koa. Monina anaty vondrom-piarahamonina iray mitoka-monina i Richar, toerana izay lafo be ny fahazoana rano sy ny fisian'ny fantsona famoahana rano maloto. Richar dia « chilapo », izay fiantso miaro fanambaniana an'ireo manana rà indiana sy afrikàna, ary tezitra mafy izy rehefa ampifandraisina amin'ny iray amin'ireo fiaviana ireo, angamba noho ny fanisahana ny vahoakany, nateraky ny fifandonana ihany koa, sy ny zavamisy hoe ireo raibe sy renibeny niarahany niaina dia tsy mba nampita taminy akory io lova ara-kolontsaina io :
Araka izany, manana andraikitra amin'izany ny sekoly. Raha resaka siansa sosialy, ny fenitry ny fanabeazana no mametraka ho lohalaharana ny fampivelarana toetsaina tia manadihady manoloana ireo lohahevitra isankarazany manoloana ny tena: ny fanajàna ny zon'olombelona sy ny fampidirana ho ao anatin'ny fiainana sosialy. Ny toeram-panabeazana rehetra dia tsy maintsy mampifanaraka ny drafitra ananany mba hanatratra ireny tanjona ireny, sady manome ihany ny fahalalahana handray fanapahankevitra amin'izay fomba hanatràrana izany, mifanaraka amin'ny vanimpotoana sy ny zavamisy.
Na izany aza, ilay drafitra [asan’] ny faritra nisy ny sekolin'i Richar, toy ny an'ireo sekoly hafa rehetra ihany, dia tsy norafetina tamin'ny fandraisana ho anaty kajikajy ireo filàn'ny ankizy tonga mandranto fahalalàna ao aminy, fa nadika fotsiny avy ety anaty aterineto.
Raha tsy eo ireny fotokevitra ireny, tsy ny kalitaon'ny fanabeazana azo ihany no voadona amin'izany, fa mipotra misolo toerana azy koa ny tsy fifandeferana :
Heverin'i Richar ho toy ny ompa ny fiantsoana olona iray ho indiana na mainty, laviny ny hifandray amin'ireo lehilahy lava volo, ireo misy tombokavatsa, ireo vehivavy mananontena, ny fiteny samihafa ary ny fahasamihafàna ara-pinoana. Midika izany fa tsy manana ny fitaovana ho entina manangana fiarahamonina misy rafitra mipetraka sy mandry fahalemana efa nantenainy nandritry ny dimampolo taona mahery ilay firenena.
Fa mbola lasa lavitra noho izany ny fandinihana. Mampitandrina ny mpanoratra ilay tantara, momba ny zavamisy hoe raha tokony ho fampiroboroboana ny fomba fijery mamerina ho anaty fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fanabeazana, dia ny mifanohitra amin'izany no ataon'ny Fanjakàna :
Omena alàlana ny fanaovana hetsika sasantsasany, toy ny “El día de Antioqueñidad”, izay tsy mitondra vokatra afa-tsy ny fanamafisana ny fampivakivakiana ho faritra, tomponantoka amin'ny fanavakavahana eny anatin'ireo vondrom-piarahamonina tezain'ny hevitra momba ny fahamboniana ara-kolontsaina. Fahatsiarovana ny andron'ny fahaleovantena azon'ilay departemanta tamin'ny 1813 io fankalazàna io. Tsy hita ao anatiny anefa na izany aza ny tondro ara-tantara, fa dia mianona fotsiny amin'ny fideràna ny mahery indrindra ao amin'ilay departemanta, ireo tompon'ny tany sy ireo fotsy hoditra mpampiasa, amin'ny fanadinoana hoe nanoratra ny tantaran'i Antioquia ihany koa ny mainty, ny safiotra, ny vazimba teratany, ireo nafindra toerana, ireo mponina avy any amorontsiraka. Toy izay nitranga rahateo tany amin'ireo departemanta hafa ao amin'ny firenena ka nosamantsamahan'ny hevitra mpitsinjara ho faritra.
Tian'i Joseph, olona fototra asongadin'ilay fitantaràna “Rehefa lehibe aho te ho-“ [es], hotapahana io fanilikilihana io. Joseph dia teraka tao Itsmina, faritra iray ao Chocó, départementa eo akaiky eo izay raisina ho toy ny mahantra indrindra ao Kolombia, manana fiaviana afrikàna ny maro amin'ireo vahoaka ao. Manazava zavatra maro izany, rehefa injay ramatoa mpampianatra ka manontany ny iray kilasy ny amin'izay ho fahitan'izy ireo ny tenany rehefa rahatrizay ka lehibe, tsy hitan'i Joseoh izay havaly. Saingy tamin'izay fotoana izay indrindra no tsapany fa teraka ny antso ho azy. Ny alina taorian'io, azony sary an-tsaina ny ho tohin'ny fiainany, ary tao an-dakilasy manome fampianarana. Nianatra tany amin'ny anjerimanontolo momba ny teknolojia i Joseph nony farany, tao Chocó, nahazo ny lisansa amin'ny fampianarana fanatanjahantena izy ary lasa nankany Urabá hanohy ny nofinofiny.
Lehilahy hendry i Joseph, nanorina fianakaviana ary manao tsara ny asany. Kanefa, ny fanjakàna, eny lavidavitra eny foana, tsy manome izay fitaovana ho amin'izany akory, dia mitaky hatrany amin'ireo mpampianatra mba hanana lenta sy kalitao ambony. Nofy ratsy no azon'ilay tanora mpampianatra tamin'izany, izay lasa tsy ampy torimaso. Samy tsy nahakivy azy toy ny nanjo ireo hafa efa nitsoa-pahana anefa, na ny tontolo sarotra misy azy, na ny tsy firaharahàna ampitain'ireo mpampianatra namany ho any amin'ny ankizy, na ireo fivoriana tsy mitondra inona.
Faritra iray « feno mpanonofy»
Miaraka amin'ny ahiahy no anehoan'ny Quotidiens d'Urabá amintsika ny fomba mahatonga ilay lasitra «Fanabeazana vaovao» noterena hapetraka noho ny fahavitsian'ireo mpianatra ho lasa manome vahana ny fanabeazana feno fahabangàna. Manaitra antsika ihany koa izy ireo amin'ny fomba ataon'ireo finoana ara-pivavahana mangeja ny fanabeazana izay tokony ho laika raha ny Lalàm-panorenana no jerena. Na izany aza anefa dia mitoetra ihany ny fanantenana noho ny fisian'ireo izay mpanohana ireo tolona tena manandanja ao amin'ilay faritra :
Soa ihany [fa] feno mpanonofy ity faritra ity, feno mpitarika sy olona vonona hampiseho fa tsy ny tantarany no hibaiko ny hoaviny.